घर अगाडी सलमान खान कु*टिए ,आखिर सलमान खान किन कु*टिए ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/घर अगाडी सलमान खान कु*टिए ,आखिर सलमान खान किन कु*टिए ?
विश्वभर कोरोना भाइरसको सं*क्रम*ण फै*लिएसँगै फिल्मी क्षेत्रमा पनि यसको अ*सर दे*खिएको छ । सधै चर्चामा रहने बलिउड पनि को*रोनाको मा*रमा परेको छ । तर ल*क*डा*उनको समयमा पनि बलिउडमा भने पुरानो फोटो र प्र*संगले स्थान बनाएको छ । बलिउडक कलाकारका पुराना फोटो र कि*स्साले सामाजिक सञ्जालमा निकै स्थान पाएका छन् । यहीबीच सलमान खानले कपिल शर्माको शोमा आफुलाई केहि मानिसले कु*टेको प्र*सँग सुनाएका छन् ।
सलमान खानका अनुसार एक समय उनको घर अगाडी सडकमा उभिएर एक फ्यान सलमानका भाइ सोहेल खानलाई गा*ली ग*रिरहेका थिए । सोहेल खान गा*ली ग*र्नुको का*र*णबारे बुझ्न ती फ्यान नजिक पुगे । तर ती फ्यानका साथमा आएका अन्य ४/५ जनाले सोहेललाई नै पि*ट्न था*ले । आफ्ना भाइलाई पि*टेको देखेर जब सलमान खान त्यस स*मु*हलाई पि*ट्न गए उल्टै ४/५ जनाको स*मु*हमा रहेका ती फ्यानहरुले सलमानलाई कु*टे ।
उनीहरुले सलमानको ढाडमा ग*हि*रो चो*ट ला*ग्ने गरी झण्डाले हि*र्का*ए । सलमान भन्छन्, ‘जब ती मानिस मलाई कु*टि*र*हेका थिए म कुनै हिरोको जस्तो रि*या*क्ट गर्नुको स*ट्टा दु*ख्यो भन्दै चि*च्या*उँ*दै थिए ।’ सलमान खान ल*कडाउनको समयमा आफ्नो पनवेल फार्म हाउसमा बसेका थिए । यहि समयमा उनको तीन गीत प्यार करोना, भाइभाइ, तेरे बि*ना रिलिज भएको थियो । सलमान अब योर मो*स्ट वा*न्टे*ड भाइ, कभी ईद कभी दिवाली, ग*न्स अफ ना*र्थ ला*इन लगायत फिल्म मार्फत देखा पर्दैछन् ।
अमेरिकामा एकै ६९ हजार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण